Famaritana ny atao hoe régime
Inona no atao hoe "régime" ?
Ny régime dia izay fika rehetra, na niniana natao na tsy niniana, izay mahatonga anao hanena ny hery omena ny vatana, tsy miraharaha ny filan’ny vatana. Efa hitantsika fa rehefa kely noho ny filan’ny vatana ny hery hanina dia lasa voatery haka any amin’ny tahiriny izy : any amin’ny tavy. Izay no mahatonga ny régime ho toa mandaitra amin’ny voalohany.
hametra ny fatran’ny hanina izay hanintsika, tsy miraharaha ny tena ilain’ny vatana. Oh : tsy misakafo maraina, na hariva nefa noana, tsy mihinan-kanina mihitsy nefa noana, tsy mihinana goûter na dia noana aza, tsy mihinana raha tsy vary 2 sotro isan’andro nefa tsy mahampy ny filanao izany, tsy mihinana raha tsy féculent iray isan’andro na dia mitady bebe kokoa noho izany aza, …
hifady sakafo izay lazaina fa « ratsy » na « mampatavy » na « tsy mahasalama » na dia tiana aza ireny sakafo ireny. Oh : paty, vary, ovy, akondro, zavoka, vokatra azo avy amin’ny ronono, pizza, hamburger, glasy, sokola, …
hihinana « sakafo » na fifangaroana sakafo voalaza fa « tsara » na « mampahia » na « mampihena » na « mahasalama » bebe kokoa, na dia tsy tiana aza izany. Oh : smoothies, ranona poarao, dite mampahia, tambavy mampahia, legioma, voankazo …
hifantoka be amin’ny lanjantsika. Izany hoe, hilanja isan’andro isika na isaky ny herinandro dia miresaka momba an’izany foana. Oh : « Very 200g aho », « nahazo 2kg aho », « firy kilao re aho izao e ? », « Oh lala nihinana be loatra indray aho tamin’ny faran’ny herinandro teo mino aho fa nahazo farafahakeliny 1kg », …
hampihena ny siramamy na tavy hanina. Oh : mihinana yaourt nature tsy misy siramamy, misotro ronono écrémé na demi-écrémé, mihinana sakafo light, mihinana sakafo tsy misy siramamy, mampiasa édulcorants fa tsy siramamy, …
hihinana coupe-faim mba hamerana ny hanohanana sy ny fihinananan-kanina. Oh : paoma, rano, yaourt, mananasy, …
« hanadio ny any anaty » na « hanao détox » amin’ny alalan’ny fanafody, zavatra mampivalana, tambavy, dite na fifangaroan-javatra samihafa. Oh : rano mafana miaraka amin’ny ranona voasary makirana, dite na tambavy mampahia, …
Manao régime ve ianao ?
Samy mihevitra daholo isika fa mahalala ny atao hoe « régime ». Menatra daholo isika, noho ny antony izay tsy fantantsika akory, rehefa misy olona mahafantatra fa manao régime isika. Fantaro fa mampatavy ny régimes. Ahoana moa raha manao régime ianao nefa tsy mahalala tsy tonga saina amin’izany akory ?
1) Efa tsy nisakafo maraina, na atoandro, na hariva ve ianao, na dia tsy fanahy inianao aza izany ? Oh : renoka ianao talohan’ny nahamasaka ny sakafo
Tsia, mila mihinan-kanina foana rehefa tongan y ora fisakafohanana Ie, satria mampatavy ny mihinan-kanina be loatra Ie, rehefa tsy noana aho
2) Mihinana goûter ve ianao ?
Ie, mihinana foana aho, efa fahazarana izany Ie, rehefa noana ihany aho Tsia, mampatavy ny mihinana goûter
3) Efa tsy nihinan-kanina ve ianao nandritra ny andro iray manontolo ?
Ie, satria mampahia na mampihena izany Sanatria an ! Famonon-tena izany ! Ie, noho ny fivavahako Tsia, tiako loatra ny mihinan-kanina, tsy ho tantiko izany
4) Iza amin’ireto sakafo manaraka ireto no mampihena na mampahia ?
Ny akondro Ny tavy toa ny menaka Ny sakafo mamy toa ny glasy, sokola, … Ny vary, ny paty, ny sakafo vita avy amin’ny lafarinina, ny vomanga, ny ovy, ny vokatra vita avy amin’ny ronono, ny pizza, ny hamburger … Ny sakafo rehetra, rehefa hanina nefa tsy noana akory Ny zavoka
5) Inona no mampahia na mampihena ?
Mihotra Misotro smoothies na ranom-boankazo fa tsy sakafo mivaingana Mikotrana sy manao régime Misotro ranona poarao Misotro tambavy mampahia Mihinana araky ny hanohanana, mikotrana, manova fomba fisainana ary mandravona ny olana rehetra Manao détox Misotro dite mampahia Mikotrana na manao fanatanjahantena Misotro rano miaraka amin’ny voasary makirana Manao régimes Misotro rano be dia be Mikotrana sy mihinan-kanina ara-pahasalamana Mihinana sakafo izay sokajiana fa « tsara » toa ny tantely, kanelina, poarao, salady, kaokaombra, … Mampiasa vokatra lazaina fa mampahia : savony, menaka, fanafody, …
6) Inona no fomba mety indrindra mba ahitana fa nihena ianao ?
Mijery fitaratra Nihena santimetatra kelikely ianao tamin’ny faritry ny vatanao ary nihanalalaka ny akanjonao. Manontany ny manodidina anao Nihena ny lanjanao
7) Mitandrina ny sakafo haninao ve ianao ?
Tsia, tsy miraharaha an’izany aho Ie, mila tandremana ny sakafo hanina mba tsy matavy Ie, satria matavy aho Ie, manao régime aho Ie, mila tandremana ny menaka sy ny siramamy Tsia, ny mba tandremako dia ny tsy hihinan-kanina raha tsy rehefa noana ihany
8) Mihinana coupe-faim ve ianao ?
Tsia, tsy ilaina izany Ie, manakana anao tsy hitsaingotsaingoka izany Ie, mampihena sy mampahia izany Ie, manampy anao tsy hihinan-kanina be loatra izany